Umshini izimbazo: Incazelo
Ukudidiyela umshini kungase kudingeke izimbazo ezintathu noma ngaphezulu. Endabeni elula, kuba ovundlile, amile ukujikeleza ukunyakaza. Isixazululo elilungile iyona 5-Ukudidiyela uhlelo, ngokuvumela ukuba asingathe kuyinkimbinkimbi kunazo imikhiqizo. Ukuze izicelo ezikhethekile xaxa izimbazo ekhona kungenziwa wanezela ithambekele kakhudlwana noma ujikelezisa izindlela.
Ukuqokwa multi-eksisi izinhlelo
umshini izimbazo has-eksisi ukuqondanisa ezimele ngesikhathi esifanayo ithuluzi kanye workpiece isihlobo kuso. izimbazo engeziwe zihlanganisa protivoshpindelny ithebula node Ukujikeleza izindlela athula futhi loading izikhala. Ilawulwa isilawuli umshini.
umshini izimbazo is ibizwa kanjalo ngoba ukunemba isicelo izimbobo phezu workpiece kanye yimuphi ahlangene ohlelweni. Njengomthetho, itafula eshayela phakathi kwezinye izixhumanisi ezimbili, futhi ithuluzi idluliswa thwi ngumuntu wesithathu. Engeza kungenzeka ukujikeleza ingxenye uqobo futhi ushintsho ebusweni ezintweni ezingafanele.
umshini izimbazo ifakwe izimbazo ezimbili ezengeziwe yokudlulisela ithuluzi ngokwayo ngendlela ezimbili Ukudidiyela uhlelo elikuvumela ukuba enze ngisho anemifantu eziyinkimbinkimbi kakhulu futhi izimbobo.
Zonke imishini-eksisi CNC ozama ukwenza nge amagama ejwayelekile ye-eksisi. Nokho, umenzi Ungashintsha incwadi drive uwedwa. Kwenzeka isimanga ukuthi ukunyakaza ovundlile lihlotshaniswa Latin incwadi-X, Y uvame ukukhonza njengephayona Iwumbono mpo, kodwa 5-axis izinhlelo, lena eksisi isiqondiso ukunyakaza etafuleni yesibili.
Ukuhambisa thwi futhi siye ohlangothini ukunyakazisa ithuluzi workpiece selisho Latin incwadi Z. Ngaphezu kwalokho, ukwanda kwenzeka ngesikhathi isiqondiso ukubala isikhundla kusuka workpiece. Lesi Sikhungo esivame ukubizwa C-eksisi ezinyakazayo ukujikeleza, iningi uphawu olunjalo isetshenziswa ukucutshungulwa cylindrical.
izimbazo engeziwe babelwa ngokuvumelana ukuqhubeka zamagama. Nokho, ithuluzi Ukujikeleza incwadi drive A. protivoshpindelya uthunyelwe khona incwadi E. ephakeme lapha ukukhethela nomkhiqizi umshini ngalokho okuthandwa zabo.
A ezihlukahlukene oluvala amasondo izinhlelo ongakhetha
umshini Jig Milling kuba ezibizayo ngamunye-eksisi wanezela. Ukuhambisa we izixhumanisi ithuluzi ezimbili zinikeza ngethuba elihle ukuze lelisu ukusika ezikhaleni ezihambisanayo. Nokho, lokhu kufanele ukulungisiswa ngokuya ubuchwepheshe.
Ngokuvamile ukwengeza ukujikeleza ithuluzi kunciphisa amandla wonke isakhiwo, futhi izinhlelo enjalo ayisasebenzi okuhlala. I kancane khona ukuxhumana kinematic, enokwethenjelwa ngaphezulu kuba umshini futhi sikwazi ukucubungula izinto baqinisa. Isixazululo okunengqondo ngaphezulu kungaba yini ukuze ungeze ukujikeleza ithuluzi, bese ukhetha imodeli nge itafula yokunyathelisa.
Lapho inguqulo yakamuva ye-umshini uzungeza iyunithi emikhulu, kodwa lokhu kuzokwenza oyisibonelo Akungabazeki ukuthi ezibizayo. Nokho, lapho liqhubeka lingumuntu isici esibalulekile Ukudidiyela-boring umshini: rigidity nokwethembeka. Encishisiwe lokhu ipharamitha e ukucutshungulwa izingxenye ngesisindo sezinti i imingcele ongaphilile.
The kungenzeka multi-eksisi izinhlelo
Jig-boring umshini ukhiqiza izingxenye eziyinkimbinkimbi:
S'khulu, irregularly okwenyanga izimbobo.
Okwenyanga iyabonakala imikhiqizo icala.
Cogwheels, amagiya, impellers, rotors.
wayekwenza Kalula izimbambo.
Ukuvuleka kunoma iyiphi projection at engele ezahlukene, anemifantu wentambo.
Yonke imininingwane eyinkimbinkimbi okudinga ukucutshungulwa lwalugobile.
Ngomjikelezo zingelashwa ngokuphelele lonke kobuso workpiece.
Eminyakeni yamuva, kusetshenziswa kakhulu etafuleni cleaner ngokubamba workpiece ngenxa edonsa emoyeni. fixing Classic ayisekho esetshenziswa, okuyinto kunciphisa isikhathi ukubuyisa futhi ifake billet entsha.
inqubo Okugcwele ukukhiqizwa
umshini Jig Milling lusebenza ku-algorithm ejwayelekile. Okokuqala, umfuziselo ngemininingwane esizayo ephepheni noma ikhompyutha siqu. Ubukhulu futhi wabuka ukudluliswa elandelayo ngokusebenzisa umshini isicelo waqonda uhlobo Vector ihluzo. UMklami ichaza isiqondiso ukunyakazisa ithuluzi ifaka misa isikhashana zobuchwepheshe. Ikhetha uhlobo ithuluzi, processing speed, ukunemba Positioning le-eksisi ligijima.
Ngemva kokuguqula imodeli ku ikhodi umshini umshini ilungele ukwenza ukusika izingxenye. Kodwa ngaphambi kokuba lokho kufanele Debug hlelo. Okokuqala kukhona 3D-ukuhlolwa kwe-displacements nokulawula yi. Khona-ke edition elinganiselwe uqale umjikelezo othomathikhi ngaphandle ligijima master node - uthi lokuphotha. Uma konke kuhambe kahle futhi ngaphandle ukuphambuka trajectory motion ke uqale ukusika izingxenye.
Khumbula ukuthi akekho CNC-umshini ayikwazi ngokomzimba ukuze uvikeleke the ngenalwazi. Okuhle kakhulu, abakhiqizi unikeze emikhonweni ezithambile okuvikela ukulimala lokukhanda. Kodwa ngisho ukwehluleka ezincane kungaholela Ukuphumula eside. Ngakho-ke, zonke izibalo zenziwa ukuze uhlelo lokwelapha kumele kube nenjongo futhi ibalwa. Ngokufanayo isinyathelo ngokungeza correctors ithuluzi ukuwohloka isinxephezelo backlash.
Amathuluzi ngokudala izinhlelo kanye umshini ukuthekelisa
umshini izimbazo, njengenjwayelo, ine imemori yangaphakathi kanye nesethi interface ejwayelekile "ukugcwalisa" uhlelo lokulawula nge nezixhumi: USB, COM, Flash-ikhadi, i-Ethernet, izindlela engenantambo. Zonke lezi zindlela izinhlelo ukuqoshwa uyazikhethela futhi kunezelwa izindleko umthwalo imishini. Endabeni elula umshini zingalawulwa nge PC ubudala esabekwa ibhodi ukulawula kanye isicelo. Lokhu ukusetshenziswa kulula kakhulu ukufinyelela kuwo, kodwa ukuze ahlele ukusebenza ezifanele zazo zonke izingxenye kudinga ulwazi elikhulu ithuluzi umshini.
Ukwakha control amakhodi esetshenziswa CAD / CAM izicelo. Ukukhetha wabo omkhulu, futhi kukhona izinguqulo mahhala abakhiqizi eziholela umshini amathuluzi. Nokho, ekukhiqizweni izingxenye liyadingeka ihlukane lezisebenzi, ehlanganisa umklami, uMklami, futhi Technological adjuster okhanda. Okuhlangenwe nakho kuye kwabonisa ukuthi umuntu oyedwa abakwazi kanyekanye bahlanganyele umjikelezo okuzenzakalelayo futhi sithuthukise ukusebenza yamanje. Ngezinhlelo zokusebenza ezifana ithuba kancane kwavela, kodwa okwamanje ayikho indlela jikelele precluding iqhaza komuntu kulesi sibalo kwemigomo umkhiqizo wokugcina.
Misa ku machining of workpiece adingekayo ukususwa Lcl zanqwabelana and chips zone ahlabayo, ukulawula imingcele kanye nokuhlolwa zangaphandle ithuluzi ubuqotho. Futhi, bayadingeka futhi ukwelashwa olunzulu, lapho kuthatha isikhathi sokwehlisa intukuthelo izingxenye evuthayo ka workpiece.
Okuzenzakalelayo ukumisa uhlelo owenza isitatimende ukuqinisekisa isenzo. Lena yindlela ukulawula khona lomsebenzi eduze umshini ngesikhatsi kokuhlinzwa. Ngaphezu kwalokho, ukuhlaba ikhefu ukuze ukulawula isango ngesikhathi kokwehla noma emva kulayishwa workpiece.
imishini Multi-eksisi bayindlala cishe yimuphi umakhi imikhiqizo metal, ifenisha, imikhiqizo plastic, imikhiqizo eyingqayizivele. Inani elikhulu Ukudidiyela izinhlelo, kukhona yezimoto futhi izindiza umkhakha, isikhala umkhakha. Futhi, kungenziwa imishini enjalo kubonakala emabaleni ukusika ishidi impahla.
multi-eksisi izikhungo emile mobile futhi kalula ingafakwa phansi flat endaweni entsha. Abakhi imishini walala upgradeable ngokungeza izimbazo ngokulandelana babe inkumbulo ukwanda, inani imibono amakhadi esibonakalayo. Isikhungo 3-eksisi kalula ukuthola uhlelo 5 noma 6-axis.
uhlelo Multi-eksisi azisetshenziselwa ngokwenza izimbobo nensimbi. Ukudidiyela kungenzeka ukulawula lwenteke ngaphansi le migomo elandelayo:
Osebenzisa isimiso esifana yakhiwe JIG ukugaya ngomshini.
amabhodi ukuyiprinta yohlelo ingahle akheke ngendlela efanayo.
Umdwebo Automatic izimoto nezinye izinto.
Ukugcwalisa lilolonge ngezinto ezahlukene eyalo yegridi.
Ngesisekelo umshini siphelile, kukhona izixazululo eziningi ngoba imisebenzi emincane ekukhiqizeni. abakhiqizi Ochwepheshe bayakwazi ukushintsha abanye amamodeli ukunikeza amarobhothi, licindezele ukubamba izingxenye noma lokufeza amaphrojekthi eziyinkimbinkimbi.
SAM "ezolile ': incazelo lobuchwepheshe kanye, uma kulinganiswa nokwenu analogue
Art design stylish: flooring Tarkett
Izitshalo ezinkulu ubunjiniyela eRussia
Ophihliza iqhwa "Kapitan Khlebnikov": ukuqoqa Greenland
Inhloso esemqoka kanye nezinhlobo ishede
TLC izindlela ezilula ukuhlaziya eziyinkimbinkimbi
Abbas Abbasov: Biography nempilo ende Inqubomgomo Azerbaijani
Amagama Buryat we ezingabekwa zokucindezelwa kwalabo bantu ukuba yesimanjemanje
Uchungechunge lwe "Pines": izibuyekezo, indaba, abadlali kanye nezindima
Ukumaketha imiqondo Eziyisisekelo
"Isigaxa" lounge: ukuphumula, intuthu, uphumule
U-Archbishop - kuyinto isonto ebalulekile San
Thenga i-diploma ye imfundo ephakeme: Izinto efanele kanye rationality
Likhuluma ngani iBhayibheli - ebhukwinitifundvo yomlando noma iqiniso okokuqala?
Salting salmon - lutho kuyinkimbinkimbi. Kodwa okumnandi!
Shoe Izitolo Petersburg: ukubuyekeza lamagama, abakhiqizi, ukubuyekezwa
Ukudluliselwa Imali nge "MTS" ukuze "Beeline" elula. Indlela ubuyekeze i-akhawunti yakho "Beeline" nge "MTS"?